Goosgooska cayaaraha - BBC News Somali
Kulamo xiiso leh ayaa caawa dhacaya kuwaasi oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, Spain, Talyaaniga iyo waliba Faransiiska
Gegida cayaaraha ee Estadio Municipal de Balaídos ee kooxda Celta Vigo waxaa ku kulamaya kooxda Real Madrid oo kulanka u baaqiga ah doonaysa inay badiso si ay uga dhibco badnaato kooxda Barcelona ee xifaaltanka ba'an uu kala dhexeeyo.
Haddii kulanka ay martida tahay Real Madrid badiso waxay 3 dhibcood ka kormari doontaa Barcelona iyadoo hal kulan uu dhiman yahay.
Copa Italia:Dhanka Talyaaniga ciyaarta ugu xiisaha badan waa Juventus oo ciyaarta Final-ka la ciyaaraysa kooxda Laziso, kulankaasi oo dhici doona 10-ka fiidnimo saacadda Afrikada Bari ka dhici doona magaalada Roma, haddii Juventus ay badiso waxay noqonaysaa markii 3-aad ee is xiga ee ay ku guulaysto koobka Italia.
Juventus oo 3-da June magaalada Cardif Champions League Final-ka kula ciyaari doonta Real Madrid waxay sidoo kale doonaysaa inay ku guulaysto horyaalka Sera A markii lixaad ee is xiga, inkastoo ciyaartii ugu dambeysay 3-1 ay kaga badisay kooxda Roma.
Kooxda Monaco waxaa caawa loo xaqiijin doona ku guulaysashada horyaalka Faransiiska ee Ligeu1 taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ee koobka ku guulaysyo tan iyo sanadkii 2000.
Monoco oo la ciyaaraysa kooxda St Etienne ayaa u baahan hal dhibic oo kaliya oo ay koobka ku qaado.
Manchester United oo haatan u muuqata inay ka rajo dhigtay afarta boos ee ugu horreysa horyaalka kubada cagta Ingiriiska waxay caawa u safraysaa Koonfurta England iyadoo garoonka St Mary;s Stadium ku qaabilaysaa kooxda Southampton v Manchester United, saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 9:45 daqiiqo.
Ciidanka Jose Mourinho waxay xoogooda isagu gaynayaan ciyaarta Finalka Europa League ee kooxda Ajax ay todobaadka dambe ay kula ciyaarayso magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Tababare Walter Mazzarri wuxuu ka tagayaa Watford:
Tababare Walter Mazzarri ayaa la shaaciyey in uu isaga tagi doono kooxda Watford ee ciyaarta Premier League-ga, iyadoo ciyaartiisa ugu dambeysay ay noqonayso kulanka Axada ee kooxdiisu la yeelanayso Manchester City.
55 jirka reer Talyaani wuxuu maamulayey kooxda Watford oo haatan kaalinta 16-aad ku jirta in ka yar sanad.
Mauricio Pochettino wuxuu sii joogi doonaa Tottenham:
Tababaraha kooxda Tottenham ee sanadkan wacdaraha Tottenham Mauricio Pochettino ayaa shaaca ka qaaday in uu mustaqbalkiisa macalinimo uu yahay kooxda Tottenham, taasi oo meesha ka saaraysa wararkii la isla dhexmareyey ee sheegayey in laga yaabo in uu ka tago garoonka White Hart Lane.
45 reer Argentine ayaa kooxda Spurs laylinayey tan iyo bishii May 2014 markaas uu ka soo tagay kooxda Southampton, waxaana dhawaan uu saxiixay heshiis 5 sano ah oo uu kula joogo Tottenham.
Ciyaar dhexmari lahayd Maleysiya iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa la baajiyey
Xiisadda dhanka siyaasadda ee caalamiga ah, arrimo amaanka iyo bad-qabka la xiriira ayaa keenay in la baajiyo kulan dhexmari lahaa xulalka Qaranka Maleysiya iyo Waqooyiga Kuuriya kaasi oo labada dal ugu tartami lahaayeen isoo bixitaanka ka qayb galka koobka Aasiya.
Kulanka ayaa markii hore waxaa dib loo dhigay markii lagu dilay nin la dhashay hogaamiyaha Kim Jung Un.
Madaxa xiriirka cayaaraha kubada cagta ee Malaysiya ayaa sheegay in ka cabsadeen in ciyaartoyda la sumeeyo.